Madaxweyne-ku xigeenka Somaliland oo xariga ka jaray mashaariic laga hirgeliyey Gabiley… | Somali Information Center
« Guddomiyaha Gobolka Bari oo ka hadlay amaanka iyo dabagal lagu hayo dadkii dilay Dr.Axmad Xaaji C/raxmaan.
Wakiilka Ahlu-sunna ee qaarada Yurub oo loo magacaabay Cabdimaalik Xassan Xirsi .. »
Madaxweyne-ku xigeenka Somaliland oo xariga ka jaray mashaariic laga hirgeliyey Gabiley… December 26, 2011 Gabiley:(SIC)-Madaxwayne-ku-xigeenka Jamhuuriyada Somaliland Md. Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil (Saylici) ayaa shalay xadhiga ka jaray mashaariic horumarineed oo Maamulka Dawlada hoose ee Degmada Gabiley ka hirgaliyeen magaalada Gabiley, mashaariicdaas oo isugu jiray dhismayaal iyo waddooyin.
Madaxwayne-kuxigeenka oo ay wehelinayeen raxan ka tirsan Golaha Wasiirada ee xukuumada tallada dalka haysa oo ay ka mid ahaayeen Wasiirrada Arrimaha Gudaha, Ganacsiga, Wershadaha iyo Dalxiiska, Hawlaha Guud iyo guriyeynta, Kaluumaysiga iyo Khayraadka Badda, Boosaha iyo Isgaadhsiinta, Shaqada iyo Arrimaha Bulshada, La- taliyaha Madaxwaynaha ee Arrimaha Siyaasada, Guddoomiyaha Xafiiska Siyaasada iyo Xidhiidhka Golayaasha Madaxtooyada, Agaasimaha Deeqaha ee Xafiiska Madaxtooyada, Taliyaha Ciidanka Booliiska Somaliland iyo Agaasimaha Guud ee Arrimaha Gudaha, isla markaana soo gaadhay magaalada barqanimadii shalay waxa duleedka bari ee magaalada kaga hor tagay masuuliyiinta Gobolka iyo Madaxda Degmada oo ay hor kacayaan Badhasaabka Gobolka Gabiley Md. Cali Aadan Meecaad iyo Maayarka Magaalada Marwo Khadra Xaaji Gaydh. Iyada oo dhinaca kalena ay Jidka hareero tubnaayeen dadwayne aad u tiro badan oo qaarkood ku labisnaayeen dharka hiddaha iyo dhaqanka, iyaga oo sidoo kalena lulayey caleemo qoyan iyo astaanta qaranka, kuna dhawaaqayey hal-ku-dhegyo ay ku muujinayeen soo dhawayntooda weftiga madaxweyne-ku-xigeenka.
Madaxwayne-ku-xigeenka iyo xubnaha waftigiisan oo bilowgii ay soo gaadheen gudaha magaalada Gabiley xadhkaha ka jaray Mashaariicda Dawladda Hoose ee Gabiley hirgeliyeen oo kala ahaa laba wado midkiiba 500m tahay, dhisme ay ku kordhiyeen Xarunta Agoomaha Gabiley, laba fasal oo ay sidoo kale ku kordhiyeen Dugsiga Hoose/dhexe ee Guudle iyo dhismaha hool aad u wayn oo qaadi doona ku dhawaad kun qof oo ay ka hir-galiyeen Gudaha Xarunta Dawlada/hoose ee Gabiley.
Ka dib markii la soo gaba-gabeeyey Xadhig-jaristii dhismaha hoolka cusub ee Xarunta Dawlada/hoose, ayaa munaasibad ballaadhan oo si wayn loo soo agaasimay loogu qabtay isla hoolka xadhiga laga jaray, taasi oo ay ka qaybgaleen salaadiin, cuqaal, wax-garadka reer Gabiley, Madaxda Ururrada Arrimaha Bulshada, iyo ururrada haweenka iyo waliba marti sharaf kale oo badan.
Waxaana ugu horreyn halkaas ka hadlay Madaxwayne-ku-xigeenka Somaliland Md. Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil oo si wayn ugu mahadceliyey Madaxda Gobolka iyo kuwa Degmada, sidoo kalena si wayn u hambalyeeyey Maamulka Dawlada/Hoose ee Gabiley oo uu ku tilmaamay inay kaga dhabeeyeen ballan-qaadkii xisbigoodii KULMIYE bulshada u fidin jireen, isaga oo arrimahaa ka hadlaya waxa uu yidhi “ Waxaan hambalyo u dirayaa Marwo Khadra Xaaji Gaydh iyo Xog-hayaha Dawlada hoose ee Gabiley oo aan ku hambalyeynayo intii ay hayeen xilkan waxqabadyada ay ku tallaabsadeen. Waxaanay kaga dhabeeyeen oo ay qayb ka tahay ballan qaadyadii uu Xisbiga KULMIYE hore ugu balan qaaday dadwaynaha ee ahaa in wax muuqda loo qabanayo.”
Md. Saylici, waxa kale oo uu ka hadlay ahmiyada nabadgalyada iyo heerka ay Somaliland ku soo gaadhay, “Labaatankaa sanno ee Somaliland jirtay waxay halkaa ku soo gaadhay Nabadgalayo ay qaybaha kala duwan ee dadwaynuhu isla qaateen, waana ta keentay in Horumar intuu doono ha leekaadee lagu tallaabsaday. Dadwaynahana waxaan u soo jeedinayaa in ay dhinac uga soo wada jeestaan wixii carqalad galinaya Nnbadgalyada.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland Md. Maxamed Nuur Carraale oo isaguna halkaa ka hadlay ayaa yidhi; “Halkan waxaan u imi in aan ka qaybgalo wax qabadka reer Gabiley ku tallabsadeen. Horumar ayuu caalamku ku tartamayaa, waxaanan ku hambalyeynayaa tartankaa ay u galeen in ay ka mid noqdaan degmooyinka horumarka ku tallaabsaday. Dhammaan gobolada Somaliland iyo degmooyinkiisa oo dhan kuma jiraan ruux dumar ahi marka laga reebo Gabiley, Gabileyna Khadri wax qabad ayey u muujisay, waanan ku hambalyeynayaa.
Horumarka, sharafta iyo nolashaba waxaa saldhig u ah nabad, hadii nabad la waayana nolol suurtogalaysaa ma jirto, waxaanan u mahadnaqayaa Abiib Diiriye oo hore u ballan qaaday imikana ballanqaaday in uu ka qaybqaadanayo wax ka qabashada arrimahaa Seemaal iyo sidii baadi goob loogu galayey cidii gaysatay dhibtaa.”
Wasiirka Boosaha iyo Isgaadhsiinta Md. Axmed Xaashi Oday oo xafladaas ka hadlay ayaa sheegay in Gabilay noqonayso goob dalxiis oo dadku u nasasho tagaan, isaga oo arrintaas ka hadlayeyna waxa uu yidhi;“Gabiley waxay noqonaysaa Afgooyihii Xamar oo kale, markii aanu Muqdisho joognay Afgooye waxaa tagi jiray Kolba labadii qof iyo cid kasta oo muraado gaar ah leh, iyo qof kasta oo u baahan meel uu saacado ku nasto. Markaa maanta Gabiley waxay u noqonaysaa Hargaysa in kolba labadii qof ee muraad lihi yimaado, iyo kolba qofkii nasasho u baahani, waa meel dalxiiska ku fiican.”
Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshadda Marwo Ilhaan Maxamed Jaamac oo iyana xafladaa ka hadashay, ayaa maayirka Gabiley Marwo Khadra Xaaji Gaydh ku hambalyeysay waxqabadka muuqda ee ay ku tallaabsatay mudadii ay xilka haysay, iyada oo arrimahaas ka hadlaysayna waxay tidhi “Waxaan hambalyeynayaa walaashay Khadra Xaaji Gaydh, waxaanan ku hambalyeynayaa waxqabadkaa muuqda ee ay ku tallaabsatay, waxa kale oo aniga oo ka tiiraanyeysan tacsi u dirayaa marxuumiintii dilka loogu gaystay Deegaanka Seemaal, qofkii waaxaa ku tallaabsadayna waxaa shacbiwaynaha ka codsanayaa in ay dawlada ka caawiyaan sidii gacan ku dhiiglayaasha gacan loogu soo qaban lahaa.”
Waxa kale oo isna halkaas hadal ka jeediyey Wasiirka Kalluumaysiga iyo Khayraadka Badda Cabdillaahi Jaamac Cismaan (Geel-jire), kaasi oo yidhi; “Munaasibadan u maynu iman in aynu shacbiga reer Gabiley canaan u la nimaadno, munaasibadanina waa mid farxadeed oo wax qabad muujinaysa in aynu ku ammaano wax qabadka ay ku tallaabsadeen weeyi, ee maaha in aynu canaanano.”
Wasiirka Hawlaha Guud Prof. Ismaaciil Muumin Aare oo isna halkaa ka hadlay ayaa si tilmaamay in cid kasta ay ku dhex jiraan dad sharwadayaal ah oo markasta dhibaato u taagan, isaga oo ku baaqay in bulshadu iska qabato cidii dhibaato u gaysanaya nabadda iyo wada noolaanshaha bulshadda dhexdeeda, waxaanu hambalyeeyey waxqabadka ka hirgalay magaalada Gabiley.
Maayarka Magaalada Gabiley oo iyaduna halkaa ka hadashay ayaa sheegtay in ay aad ugu faraxsantahay in mashaariicdan ay ku tallaabsadeeni iyada iyo Maamulkeedu ee xafladii Furitaankeedana ay ka soo qaybgaleen Madaxwayne-ku-xigeenka iyo Wasiirada tirada intaa leeg iyo Madaxda Qaranka. Waxaanay ballanqaaday in mudada ay joogto kaga tagi doonto Gabiley taariikh.
Waxa kale oo Iyaguna halkaa ka hadlay Suldaan Ibraahim Jaamac Samatar iyo Cuqaal tiro badan oo dhammaantood hambalyeeyey tallabooyinka horumarineed ee lagu tallaabsaday mudadii xukuumadani talada dalka haysay.